Zvingaitwa Neungano Pakubatsira Vadzidzi veBhaibheri Kusvika Pakubhabhatidzwa | Nharireyomurindi Yekudzidza
NYAYA YEKUDZIDZA 10
‘Nhengo imwe neimwe inobatsira kuti muviri ukure.’—VAEF. 4:16.
RWIYO 85 Gamuchiranai
1-2. Ndivanaani vanogona kubatsira mudzidzi weBhaibheri kusvika pakubhabhatidzwa?
“NDAINAKIDZWA nezvandaidzidza muBhaibheri,” anodaro Amy uyo anogara kuFiji. “Ndaiziva kuti ichi chaiva chokwadi. Asi pandakazotanga kuwadzana nehama nehanzvadzi, ndipo pandakatanga kuchinja uye kufambira mberi kusvika pakubhabhatidzwa.” Zvakaitika kuna Amy zvinoratidza chokwadi chinokosha chekuti: Kana mudzidzi weBhaibheri akabatsirwa nevamwe vari muungano, kakawanda kacho anoramba achifambira mberi kusvika pakubhabhatidzwa.
2 Muparidzi mumwe nemumwe anogona kubatsira kuti ungano ikure. (VaEf. 4:16) Mumwe piyona anonzi Leilani, uyo anogara kuVanuatu, anoti: “Pane chirevo chinoti mwana ndewemunhu wese. Ndinofunga kuti mashoko iwayo anoshandawo pakuita kuti vanhu vave vadzidzi; zvinowanzoda ungano yese kuti munhu auye muchokwadi.” Vabereki, hama neshamwari, uye vadzidzisi, vese vanobatsira pakuita kuti mwana azova munhu mukuru. Vanoita izvi pavanokurudzira mwana uye pavanomudzidzisa zvimwe zvinhu zvinokosha. Saizvozvowo, hama nehanzvadzi dziri muungano dzinogona kubatsira vadzidzi veBhaibheri kusvika pakubhabhatidzwa padzinovapa mazano, kuvakurudzira uye kuvaratidza muenzaniso wakanaka.—Zvir. 15:22.
3. Wadzidzei pane zvakataurwa naAna, Daniel, naLeilani?
3 Nei muparidzi anoitisa chidzidzo cheBhaibheri achifanira kubvuma kuti vamwe vaparidzi vanogona kubatsirawo mudzidzi wacho? Mumwe piyona chaiye wekuMoldova anonzi Ana anoti, “Zvakaoma chaizvo kuti munhu mumwe chete abatsire mudzidzi weBhaibheri pane zvese zvaanenge achida paanotanga kufambira mberi.” Mumwe piyona chaiye anoshumirawo munyika iyoyo anonzi Daniel * anoti, “Kakawanda, vamwe vaparidzi vanogona kutaura chimwe chinhu chinobaya mwoyo wemudzidzi, chimwe chinhu chandinenge ndisina kumbofunga nezvacho.” Leilani anotaurawo chimwe chikonzero achiti: “Kana vamwe vakaratidza kuti vanoda mudzidzi zvichamubatsira kuti azive kuti tiri vanhu vaJehovha.”—Joh. 13:35.
4 Unogona kuva nemubvunzo wekuti, ‘Ndingaitei kuti ndibatsire mudzidzi weBhaibheri kufambira mberi asi ndisiri ini ndiri kuitisa chidzidzo chacho?’ Ngationei zvatinogona kuita kana mumwe munhu akati tiende tese kuchidzidzo cheBhaibheri uye zvatingaita kana mudzidzi weBhaibheri ava kupinda misangano. Tichaonawo kuti vakuru vangabatsira sei vadzidzi veBhaibheri kusvikira vabhabhatidzwa.
KANA MUMWE MUNHU AKATI MUENDE MESE KUCHIDZIDZO CHEBHAIBHERI
Kana mumwe munhu akati muende mese kuchidzidzo cheBhaibheri, gadzirira chidzidzo chacho (Ona ndima 5-7)
5. Kana mumwe munhu akati muende mese kuchidzidzo cheBhaibheri, basa rako nderei?
5 Pachidzidzo cheBhaibheri, mudzidzisi ndiye ane zvakawanda zvaanofanira kuita pakubatsira mudzidzi kuti anzwisise Shoko raMwari. Kana mudzidzisi akakukumbira kuti muende mese kuchidzidzo chacho, uripo pakumutsigira. (Mup. 4:9, 10) Zvii zvaungaita kuti chidzidzo chacho chibudirire?
6. Paunoenda nemumwe munhu kuchidzidzo cheBhaibheri, ungashandisa sei zano riri pana Zvirevo 20:18?
6 Gadzirira chidzidzo chacho. Tanga nekukumbira mudzidzisi kuti akuudze zvishoma nezvemudzidzi wacho. (Verenga Zvirevo 20:18.) Unogona kumubvunza kuti: “Zvii zvaunoziva nezvemudzidzi weBhaibheri uyu? Muri kudzidza papi? Unoda kuti adzidzei pachidzidzo chacho? Pane zvandisingafaniri kuita kana kutaura here patinenge tiri pachidzidzo? Ndingakurudzira sei mudzidzi kuti afambire mberi?” Ichokwadi kuti mudzidzisi haazokuudzi mashoko ausingafaniri kuziva ane chekuita nemudzidzi, asi zvaachakuudza zvinogona kubatsira. Mumishinari anonzi Joy anowanzokurukura izvi nevaya vanomuperekedza kuzvidzidzo zveBhaibheri. Anoti: “Kukurukura zvinhu izvi kunogona kuita kuti wandinenge ndabuda naye ade kubatsira mudzidzi uye kuti azive zvaangafanira kutaura pachidzidzo chacho.”
7. Nei uchifanira kugadzirira usati waenda nemumwe munhu kuchidzidzo cheBhaibheri?
7 Kana mumwe munhu akakuti muende mese kuchidzidzo cheBhaibheri, zvakanaka kuti ugadzirire zvamuchadzidza. (Ezra 7:10) Daniel ambotaurwa nezvake anoti: “Ndinofara kana wandinenge ndabuda naye akagadzirira chidzidzo. Kana akadaro, zvaachataura zvichanyatsobatsira.” Izvi zvinogonawo kuita kuti mudzidzi aone kuti mese makanyatsogadzirira uye zvinogona kumubatsira kuti agadzirirewo. Kunyange kana ukatadza kuwana nguva yekunyatsogadzirira chidzidzo chacho, wana nguva yekuongorora pfungwa huru dzirimo.
8. Ungaitei kuti munyengetero waunopa pachidzidzo cheBhaibheri ubatsire?
8 Munyengetero unokosha chaizvo pachidzidzo cheBhaibheri, saka gara wafunga zvauchataura kana ukanzi unyengetere pachidzidzo. Izvi zvinogona kuita kuti munyengetero wako ubatsire. (Pis. 141:2) Imwe hanzvadzi inogara kuJapan inonzi Hanae, ichiri kuyeuka minyengetero yaipiwa neimwe hanzvadzi yaiuya nemunhu aimudzidzisa Bhaibheri. Hanae anoti: “Ndaiona kuti yaiva neushamwari hwakasimba naJehovha, uye ndaidawo kuitevedzera. Ndainzwawo kuti inondida payaitaura zita rangu muminyengetero yayo.”
9. Maererano naJakobho 1:19, ungaitei kuti uve mubatsiri akanaka pachidzidzo cheBhaibheri?
9 Batsira mudzidzisi pachidzidzo. Mumwe piyona chaiye anogara kuNigeria anonzi Omamuyovbi anoti, “Mubatsiri akanaka anonyatsoteerera pachidzidzo. Anotaura zvinobatsira, asi haatauri zvakawandisa nekuti anoziva kuti mudzidzisi ndiye ari kutungamirira chidzidzo chacho.” Saka ndepapi paungataura chimwe chinhu uye zvii zvaungataura nezvazvo? (Zvir. 25:11) Mudzidzisi paanenge achikurukura nemudzidzi, nyatsoteerera. (Verenga Jakobho 1:19.) Izvi zvichaita kuti unyatsoziva nguva yakanaka yekuti utaure. Unofanirawo kutanga wafunga usati wataura. Semuenzaniso, haufaniri kuzotaura zvakawandisa, kudimburira mudzidzisi panzira, kana kutanga imwe nyaya isinei nezvamuri kukurukura. Asi unogona kujekesa pfungwa yamunenge muchikurukura uchishandisa mashoko mashoma, muenzaniso mupfupi, kana mubvunzo. Dzimwe nguva unogona kuona sekuti hauna zvakawanda zvekutaura panyaya yamunenge muchikurukura. Asi kana ukarumbidza mudzidzi uye ukaratidza kuti une hanya naye unenge uchitomubatsira kuti afambire mberi.
10. Zvakaitika muupenyu hwako zvinogona kubatsira sei mudzidzi weBhaibheri?
10 Muudze zvakaitika muupenyu hwako. Kana zvichibatsira mudzidzi, unogona kumuudza kuti wakawana sei chokwadi, wakakunda sei rimwe dambudziko kana kuti Jehovha akakubatsira sei muupenyu hwako. (Pis. 78:4, 7) Izvi zvinogona kunge zviri izvo chaizvo zviri kudiwa nemudzidzi. Zvinogona kusimbisa kutenda kwake kana kumukurudzira kuti arambe achifambira mberi kusvika abhabhatidzwa. Uye zvinogona kumubatsira kuona kuti angakunda sei dambudziko raari kusangana naro. (1 Pet. 5:9) Gabriel, uyo anogara kuBrazil uye ava kushumira sapiyona anoyeuka kubatsirwa kwaakaitwa paaidzidza Bhaibheri. Anoti: “Pandakanzwa zvakaitika kune dzimwe hama, ndakadzidza kuti Jehovha anoziva matambudziko atinosangana nawo. Uye kana vachikwanisa kuakunda, neniwo ndinokwanisa.”
MUDZIDZI WEBHAIBHERI PAANOPINDA MISANGANO
Tese tinogona kukurudzira mudzidzi kuti arambe achiuya kumisangano (Ona ndima 11)
11-12. Nei tichifanira kugamuchira mudzidzi weBhaibheri nemufaro paanouya kumisangano?
11 Kuti mudzidzi weBhaibheri asvike pakubhabhatidzwa, anofanira kugara achipinda misangano yeungano uye achibatsirwa nayo. (VaH. 10:24, 25) Munhu anomudzidzisa Bhaibheri anogona kumukoka kuti apinde misangano kekutanga. Kana akauya, tese tinogona kumukurudzira kuti arambe achiuya kuImba yeUmambo. Izvozvo tingazviita sei?
12 Gamuchira mudzidzi nemufaro. (VaR. 15:7) Kana mudzidzi akagamuchirwa nemaoko maviri kumisangano, kazhinji kacho anoramba achiuya kuImba yeUmambo. Kwazisa mudzidzi zvine ushamwari uye musume kune vamwe, asi usaita zvinhu zvingaita kuti anzwe asina kusununguka. Usafunga kuti ane mumwe munhu waainaye; anomudzidzisa Bhaibheri anogona kunge asati asvika kana kuti aine zvimwe zvaari kuita. Nyatsoteerera zviri kutaurwa nemudzidzi uye ratidza kuti une hanya naye. Kugamuchira mudzidzi nemufaro kunogona kumubatsira sei? Ona zvakaitika kuna Dmitrii, uyo akabhabhatidzwa makore mashoma apfuura uye ava mushumiri weungano. Achifunga nezvemusangano wekutanga waakapinda anoti: “Imwe hama yakandiona ndiri panze peImba yeUmambo ndichitya uye yakabva yapinda neni mukati. Vakawanda vakauya kuzondikwazisa. Izvi zvakandishamisa chaizvo. Ndakazvifarira chaizvo zvekuti ndakangoti dai taipinda hedu misangano mazuva ese. Ndakanga ndisati ndamboona zvakadai.”
13. Zvaunoita zvinogona kubatsira sei mudzidzi weBhaibheri?
13 Iva muenzaniso wakanaka. Zvaunoita zvinogona kubatsira mudzidzi weBhaibheri kuti aone kuti tiri vaKristu vechokwadi. (Mat. 5:16) Vitalii uyo ava kushumira sapiyona kuMoldova, anoti: “Ndakadzidza zvakawanda pamararamiro uye mafungiro anoita vamwe vari muungano. Izvi zvakaita kuti ndigutsikane kuti Zvapupu zvaJehovha ndicho chitendero chechokwadi.”
14. Muenzaniso wako unogona kubatsira sei mumwe munhu kuti arambe achifambira mberi?
14 Kuti mudzidzi akodzere kubhabhatidzwa, anofanira kushandisa zvaari kudzidza. Dzimwe nguva izvi hazvisi nyore. Asi kana akaona kuti kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri kuri kukubatsira, anogona kuva nechido chekukutevedzera. (1 VaK. 11:1) Funga nezvaHanae, ambotaurwa. Anoti: “Zvandaidzidza ndizvo zvaitoitwa nehama nehanzvadzi muupenyu hwadzo. Ndakaona zvandinogona kuita kuti ndikurudzire vamwe, ndivaregerere uye ndivaratidze rudo. Vaitaura zvakanaka nezvevamwe. Ndaida kuvatevedzera.”
15. Maererano naZvirevo 27:17, nei tichifanira kushamwaridzana nemudzidzi weBhaibheri anogara achipinda misangano?
15 Shamwaridzana nemudzidzi. Mudzidzi paanoramba achipinda misangano, ramba uchiratidza kuti une hanya naye. (VaF. 2:4) Edza kumuziva. Unogona kumurumbidza nezvekufambira mberi kwaari kuita, uye unogona kumubvunza nezvekudzidza kwaari kuita Bhaibheri, mhuri yake uye basa rake. Asi usazomubvunza mibvunzo ingaita kuti ashaye pekupinda. Kukurukura naye seizvi kunogona kuita kuti muve neushamwari. Paunova shamwari yemudzidzi, unogona kumubatsira kuti afambire mberi kusvikira abhabhatidzwa. (Verenga Zvirevo 27:17.) Iye zvino Hanae ava kushumira sapiyona wenguva dzese. Achifunga nezvepaakatanga kupinda misangano anoti: “Kuva neshamwari muungano kwakaita kuti ndifarire kuenda kumisangano uye ndaienda kunyange pandainzwa ndakaneta. Ndainakidzwa nekuva neshamwari dzangu itsva, uye izvi zvakandibatsira kuti ndirege kushamwaridzana nevanhu vasinganamati Jehovha. Ndaida kuva pedyo naJehovha uye nehama nehanzvadzi dzemuungano. Saka ndakasarudza kubhabhatidzwa.”
16. Ndezvipi zvimwe zvaungaita kuti mudzidzi weBhaibheri anzwe kuti anodiwa muungano?
16 Mudzidzi paanoramba achifambira mberi, mubatsire kuti aone kuti anodiwa muungano. Unogona kuita izvozvo nekumukoka kuti mumbotandara. (VaH. 13:2) Achifunga nezvenguva yaaiva mudzidzi weBhaibheri, Denis, uyo anoshumira kuMoldova, anoti: “Kakawanda ini nemudzimai wangu taikokwa nehama kuti tizotandara. Vaitiudza nezvekubatsirwa kwavakaitwa naJehovha. Izvozvo zvakatikurudzira. Takanyatsoona kuti tinoda kushumira Jehovha uye kuti taizova neupenyu hunofadza.” Kana mudzidzi weBhaibheri ava muparidzi asina kubhabhatidzwa unogona kumukumbirawo kuti mubude mese muushumiri. Mumwe muparidzi wekuBrazil anonzi Diego anoti: “Hama dzakawanda dzaindikumbira kuti tibude tese muushumiri. Iyi yaiva nzira yakanaka chaizvo yekuti ndinyatsodziziva. Ndakadzidza zvakawanda uye ndakawedzera kuswedera pedyo naJehovha naJesu.”
VAKURU VANGABATSIRA SEI?
Vakuru, kufarira kwamunoita vadzidzi kunogona kuvabatsira kufambira mberi (Ona ndima 17)
17. Vakuru vangabatsira sei vadzidzi veBhaibheri?
17 Wanai nguva yekuva nevadzidzi veBhaibheri. Vakuru, kana mukaratidza kuti munofarira vadzidzi, zvichavabatsira kufambira mberi kusvika pakubhabhatidzwa. Garai muchitaura nevadzidzi veBhaibheri pamisangano. Vachaona kuti mune hanya navo kana mukayeuka mazita avo kunyanya pavanotanga kupindura pamisangano. Munogona here kuwana nguva yekuti muende nemuparidzi paanenge achienda kuchidzidzo cheBhaibheri? Munogona kubatsira mudzidzi wacho kupfuura zvamungafunga. Mumwe piyona anonzi Jackie anogara kuNigeria anoti: “Vadzidzi veBhaibheri vakawanda vanoshamisika pavanoziva kuti hama yandinenge ndauya nayo inoshumira semukuru. Mumwe wandinodzidza naye Bhaibheri akati: ‘Mufundisi wangu haangamboiti zvakadaro. Anongoshanyira vapfumi chete, ndokunge vamubhadhara!’” Mudzidzi iyeye ava kupinda misangano.
18. Vakuru vangaita sei basa ravo ravakapiwa sezvakanyorwa pana Mabasa 20:28?
18 Dzidzisai uye kurudzirai vadzidzisi veBhaibheri. Vakuru mune basa rakakura rekubatsira vaparidzi kuti vabudirire muushumiri uye pakuitisa zvidzidzo zveBhaibheri. (Verenga Mabasa 20:28.) Kana mumwe munhu achinyara kuitisa chidzidzo cheBhaibheri muripo, kumbirai kuitisa chidzidzo chacho. Jackie ambotaurwa nezvake anoti: “Vakuru vanogara vachindibvunza nezvevanhu vandinodzidza navo Bhaibheri. Pandinoomerwa nekuitisa chidzidzo cheBhaibheri, vanondipa mazano.” Vakuru vanogona kuita zvakawanda pakukurudzira vadzidzisi veBhaibheri. (1 VaT. 5:11) Jackie anowedzera kuti: “Ndinofara kana vakuru vakandikurudzira uye vakandiudza kuti vanokoshesa kushanda nesimba kwandinoita. Mashoko iwayo anoita semvura yekunwa inotonhorera pakunenge kuchipisa. Kurumbidza kwavanondiita kunoita kuti ndiwedzere kuva nechivimbo uye mufaro pandinoitisa chidzidzo cheBhaibheri.”—Zvir. 25:25.
19. Tese tinogona kuva nemufaro wei?
19 Kunyange kana tisina munhu watiri kudzidza naye Bhaibheri panguva ino, tinogona kubatsira mumwe munhu kuti afambire mberi kusvika pakubhabhatidzwa. Tisingatauri mashoko akawandisa tinogona kubatsira mudzidzisi paanenge achiitisa chidzidzo kana tikataura mashoko akanyatsogadzirirwa. Tinogona kushamwaridzana nevadzidzi pavanouya kuImba yeUmambo, uye tinogona kuva mienzaniso yakanaka kwavari. Vakuru vanogona kukurudzira vadzidzi nekuwana nguva yekumbova navo. Vanogonawo kukurudzira vadzidzisi nekuvadzidzisa uye kuvarumbidza nezvakanaka zvavanoita. Tinofara chaizvo patinoita chimwe chinhu, kunyange kana chiri chidiki pakubatsira mumwe munhu kuti ade Baba vedu Jehovha uye avashumire.
UNGABATSIRA SEI VADZIDZI VEBHAIBHERI KUTI VAFAMBIRE MBERI KUSVIKA PAKUBHABHATIDZWA . . .
kana mumwe munhu akati muende mese kuchidzidzo cheBhaibheri?
pavanotanga kupinda misangano?
kana uchishumira semukuru?
RWIYO 79 Vadzidzisei Kumira Vakasimba
^ ndima 5 Panguva ino vamwe vedu havana zvidzidzo zveBhaibheri. Asi tese tinogona kubatsira mumwe munhu kuti afambire mberi kusvika pakubhabhatidzwa. Munyaya ino tichaona kuti mumwe nemumwe wedu angabatsira sei mudzidzi kuti asvike pakubhabhatidzwa.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvingaitwa Neungano Pakubatsira Vadzidzi veBhaibheri Kusvika Pakubhabhatidzwa